चुनाव बारे फेसकुबमा लेखेपनि जेल सजाय ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
चुनाव बारे फेसकुबमा लेखेपनि जेल सजाय !
देशका दुई सय ८३ वटा स्थानीय तहमा पर्सी हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि मौन अवधि सुरु भएको छ । गएराती १२ बजेदेखि मौन अवधिसुरु भएसँगै राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसार बन्द भएको छ । ३४ जिल्लाका ४९ लाख ५६ हजार नौ सय २५ मतदाता स्थानीय सरकार निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि चुन्न मतदानको प्रतीक्षामा छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले मौन अवधि सुरु भएकाले अब मतदानको काम पूरा नभएसम्म प्रचार गर्न नपाईने बताउनुभयो ।
उहाँले फेसबुकमा समेत कुनै उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा लेख्न नपाइने बताउनुभयो । कसैले कुनै उम्मेदवारको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै प्रकारले प्रचारप्रसार गर्नगराउन निषेध गरिएको छ । निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै आचारसंहिता लाग्ने भए पनि मौन अवधिमा भने विशेष संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । कानुनअनुसार निर्वाचनको ४८ घन्टाअघि मौन अवधि सुरु हुनेछ ।